Faah Faahin Shabaab iyo Shacab dagaal culus dhex maray! – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Jul 4, 2018
Hornafrik-Kadib maalmo badan oo xiisad dagaal u dhaxeysay Al-shabaab iyo dadka shacabka ah ee ku nool deegano ka tirsan Gobolka mudug ayaa saakay arooei waxaa bilowday dagaal u dhaxeeya labada dhinac.
Al-shabaab ayaa dadka degan deegaanada Caaad iyo Camaara ee Mudug waxaa ay ku amreen in ay diyaariyaan caruur Shabaab ka u adeegsadaan dagaalada balse waa ay ka diideen.
Adkeysi badan iyo cabsi badan kadib ayaa dadka shacabka weerareen goobaha shabaab kaga suganaayeen deeganadaasi.
Dagaalka bilowday saaka ayaa wararka laga helayo waxaa ay sheegayaan in Shabaab laga dilay dhowr dagaalame , kuwo na laga qabsaday , sidoo kale shacabka iska caabinaya ayaa waxaa gaaray dhimasho iyo dhawac.
Inta la xaqiijiyay mid kamid ah odayaasha deegaanka Caad ayaa ku dhibtau dagaalka , waxaana ku dhaawac may ku dhawaad tiban qof oo la shegayo ib dhaawacyadooda qaar loo soo qaaday magaalada Cadaado ee Galgaduud.
Shabaab ayaa ay adagtahay in la ogaadi tirada laga dilay , waxaase dad arkay inoo sheegeen in ku dhawaad toban laga dilay ayna qaateen meydadkooda ,
Sidookale Shabaab Waa ay jareen isgaarsiinta deegaanadaasi.
Axmed Madoobe oo isku shaandheyn ku sameeyay Golahiisa wasiirada.